“ ☻☻ပွဲတော်☻☻ ” | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Ideas & Plans » “ ☻☻ပွဲတော်☻☻ ”	21
“ ☻☻ပွဲတော်☻☻ ”
Posted by အရင့်ရောင် on Jul 11, 2012 in Ideas & Plans | 21 comments
ချောင်ပါတယ် မောင့် စကားရယ်ကြောင့်
သရက်ချဉ် ၊ ငါးချဉ်နှယ် သိပ်ပါလို့
ရက်လိုက်ဟ မြန်မြန် ။
ဆွဲချတဲ့ …ပွဲ ………..။
water-melon says: ပွဲတော် နွှဲပျော်
mamanoyar says: ဟားးးးးးးးးးးးးးးးး
ရန်ကုန်မြို့က ဘတ်စကား စီးရမှာတောင်
အရင့်ရောင် says: ဘတ်(စ်)ကားတွေ အဲလိုပါပဲ
အရင့်ရောင် နှစ်ခါ သုံးခါရှိပီလေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1251
ဘဲဥ says: ဒီကြားထဲ ထောက်လှမ်းရေး ကိုကိုတွေကိုလည်းကြောက်ရသေးသဗျ
အရင့်ရောင် says: သူ့လို အတွေးက ၀င်လိုက်သေးသဗျ………
snow white says: လိုင်းကားစီးတာကိုလို့ taxi ငှားစီးပါလား လိုင်းကားစီးရင်တော့
သရက်ချဉ် ၊ ငါးချဉ်နှယ် သိပ်ပါလို့ အဲ့ထက်တောင်စိုးသေးတယ် ။။
အရင့်ရောင် says: စနိုး ရေ
တက်ကချီက ယောက်ခမကြီးက မမောင်ဘူးဗျ
ဇောက် ထိုး says: မိန်းကလေးကို လက်ကလေးအသာဆွဲချခံရဖို့များ ဘာခက်တာမှတ်လို့….
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: “ပျိုပျိုမေဆင်းမယ်ဟြေတော့
ရက်လိုက်ဟ မြန်မြန် ။”
အဲဒီမှာလေ ရက် ဆိုတာက ဘာကိုများ
အရင့်ရောင် says: ကားရပ်ခြင်းကို ဆိုပါလိုပါ၏
ရ ကောက်ပသပ် =ရပ် ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးကြပါကုန်လော့……
mayjuly says: အော် ဒါလား… ရက်ပါ စကားလေဗျာ .. :P
ကြောင်လေး says: စပယ်ယာကအပိုင်ပဲလို့တွေးပြီး ကိုယ့် နှုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့ပြန် ရက်တာနေမှာ ပေါ့ကိုသော်ရဲ့။
မောင်ပေ says: ပွဲတော်
အလင်းဆက် says: အဲ… လှ….လှ ချည်လား….။
ဖွက်ထားတဲ့ လမင်းကို ထုတ်မပြခဲ့ပဲ…။
တာ၇ာမင်းဝေရဲ့ကဗျာ တစ်ပိုဒ်ကို သတိရသွားလို့ ပါ.။ အဟိ ။
မမ အညာသူ says: အားပေးသွားပါတယ်ရှင်
shwe kyi says: နောက်ကားပါလာလို့ကတော့ ပျိုပျိုရော အိုအိုရော ကိုကိုရော အားလုံးဆွဲချခံထိရော။
အရင့်ရောင် says: ရွှေကြည်လေးရေ……….
ပျိုတာ အိုတာ ဘာမှ နားမလည်ဘူးနော်
ရွှေကြည် လည်း အဲလိုကြုံဖူးပြီနဲ့တူတယ်
shwe kyi says: ကိုအရင့်ရေ ဆွဲချတာကတော်သေးတယ် ဆွဲတင်ရင်စိတ်ညစ်တယ်။
အရင့်ရောင် says: အဲ အကုန်ပေါ်တော့မှာပဲနော်
အရင့်ရောင် ဟြေမှ ရွှေကြည် ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်က ပေါ်လွင်လာတော့တယ်
shwe kyi says: အဲ အဲ ရှုပ်ကုန်တော့မှာပဲ။ နားလည်မှုတွေလွဲကုန်မယ်နော် ကိုအရင့် :D
အရင့်ရောင် says: ဟုတ်လား
နားလည်မှုတွေ မလွဲပါဘူးတဲ့ ထည………
Comments By Postရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဦးဦးပါလေရာ - Foreign Residentကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mr. MarGaမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Phoe Thitsar - Myo Thantမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - N@ng Ghi Ghi Joe Zကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46အဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - ဦးဦးပါလေရာပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Myo Thantမင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaအတ္တဆန် - ဘဲဥ - အရီးခင်လတ်ကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - ခရီးသည်ကြီး - TNAလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - အရီးခင်လတ် - Mr. MarGaယုံလား? - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်လုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ဘဲဥ - ကထူးဆန်းမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဘဲဥ - ခရီးသည်ကြီးသူ - ရွှေ ကြည် - Mobile13ရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ရွှေတိုက်စိုးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - MaMa - N@ng Ghi Ghi Joe ZCongress - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - parlayar 46အလှူခံဖလားကြီးပိုက်ကာပြန်လာတယ်..... - ဝရမ်းပြေးအဘဝက် - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - Myo Thant - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77766 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67182 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58140 Kyats )MaMa (57602 Kyats )Top Posts & Pagesမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်